Shuruudaha iyo Xaaladaha Adeegyada Guud ee Shirkadaha & Shirkadaha Inc.
Heshiiskan ("Heshiiska") "adiga" iyo "aad" tixraac macaamiil kasta, "annaga, annaga," "our," "GCS," iyo "shirkadda" waxay tixraacaan Adeegyada Guud ee Shirkadda, Inc. waxay maamushaa magacyada astaanta Shirkadaha Laxiriira, Qorshooyinka Ilaalinta Hantida, Shirkadda Dibadda, iyo sidoo kale noocyada kale ee websaydhada iyo websaydhada), qandaraasleyaasheeda, wakiillada, shaqaalaha, saraakiisha, agaasimayaasha iyo dadka la shaqeeya iyo “Adeegyada” waxaa loola jeedaa adeegyada aannu bixinno. Heshiiskani wuxuu sharxayaa waajibaadka naga saaran iyo waajibaadkaaga annaga oo ah sida ay ula xiriiraan Adeegyada. Adigoo adeegsanaaya Adeegyada hoos yimaada Heshiiskan, waxaad qiraysaa inaad aqbashay oo aad aqbashay inaad ku koobnaato dhammaan shuruudaha iyo shuruudaha Heshiiskan iyo wixii xeerar ama quseeya ama sharciyada ku habboon ama annaga ah aynaan daabici karno. Waxaad qiraysaa inaad ka weynaatay siddeed iyo toban sano jir, ama haddii kale aad gaartay da'da aqlabiyadda ee xukunkaaga.
Iyada oo la raacayo heshiiskan, GCS waxay samayn doontaa baadi goob hordhac ah, magac aan ku xirneyn oo helitaan ah si loo go'aamiyo in magaca shirkadda aad dooratay ay horay u isticmaali jireen shirkad kale gobolkaaga, gobolkaaga ama waddankaaga. (Shirkad, shirkad deyn xadidan leh, iyo / ama noocyo shirkad oo la mid ah ayaa loo isweydaarsanayaa halkan halka ay ku habboon tahay.) Haddii magaca shirkadeed ee aad dooratay aan la heli karin, GCS ayaa markaa (sida ay u kala horreyso u kala doorbiday dalabkaaga ee dalabkaaga) raadinaya shirkad kale oo beddel ah magacyada aad soo bandhigtay illaa natiijooyinka raadinta ay dhalaan magac shirkadeed oo la heli karo. Haddii ay dhacdo inaadan ku soo darin naqshadeeye shirkadeed habboon (ie, "Inc.," "Corp.," ama "Corporation") GCS waxay ku dari doontaa "Inc" (ama "LLC" ee shirkadaha mas'uuliyada xadidan) dulmarka. ka xereysanaya gobolka aad dooratay, gobolkaaga ama dalkaaga.
Waxaad ku raacsan tahay inaad mas'uul ka tahay higaadda magaca shirkadda (magacyada) shirkadaha aad soo bandhigtay. Waxaad ku raacsan tahay inaad labo jeer hubisay in magaca (magacyada) shirkadeed ee halkan ku qoran loo higaadiyay sida aad u rabto. Waad fahansan tahay in codsigani aan laga noqon karin ka dib markaad gudbiso codsigaaga.
In kasta oo aan ku dadaalno sidii aan u heli lahayn macluumaadkii ugu dambeeyay, haddana ma dammaanad qaadi karno in macluumaadka ugu dambeeyay ee ku saabsan helitaanka magaca shirkadda la ina siiyey. Sidaas awgeed, dammaanad kama qaadno in magaca loo heli karo in loogu isticmaalo magaca shirkadeed ee gobolkaaga, gobolkaaga ama waddankaaga. GCS mas'uul kama ah si kasta oo loogu tiirsanaado helitaanka magac shirkadeed. Intaa waxaa sii dheer, waxaan kugula talineynaa inaadan daabacin waraaqaha warqadaha, kaararka ganacsiga ama aadan sameyn wax maalgashi magaca ilaa aad kaheleyso xaqiijinta dowlada in magaca la ogolaaday shirkadana la xareeyay.
Haddii ay dhacdo in magacaaga shirkadeed iyo beddelkaaga aan la heli karin oo aadan ku beddelin qoraallo kale oo qoraal ah maalinta amarkaaga, waxaad u oggolaaneysaa GCS inay ku darto kelmadaha "Shirkadaha," "Haystaha," "Maareynta," "Xaragyada," ama “Magaalo” dhamaadka magaca. Haddii waxyaabaha kale ee jira aan la heli karin dawadaada kaliya ayaa ku koobnaan doonta khidmadaha la siinayo GCS. Ka fiiri qaybta QAYBTA IYO QAAR-DHEERADA halkan faahfaahin dheeraad ah.
Ma hubin karno mana baari karno si aan u aragno bal in magaca shirkadeed ee aad dooratay, ama isticmaalka aad ka sameysay magaca shirkadda, uu jabin doono sharciga kale ee dadka kale. Waxaan kugu boorinaynaa inaad baaritaan sameyso si aad u aragto in magaca shirkadda aad dooratay ama isticmaalkiisa ay jebinayso xuquuqda dadka kale, iyo gaar ahaan waxaan kugula talineynaa inaad raadsato talo lataliye karti leh oo shati u leh ku shaqeynta sharciga sharciga ku habboon.
DIIWAANKA IYO KHATARTA
Haddii amar shirkad Mareykan ah la tirtiro ka dib bixinta ay qaadatay GCS laakiin ka hor inta aan magaca hubinta la dhameystirin, GCS waxay soo celin doontaa wadarta tirada qadarka wixii kharash ah oo dhaca iyo $ 95 dollar oo khidmadda ah. Haddii amarkii la buriyo kadib markii magaca la dhammeeyo laakiin ka hor inta aan la abuurin dukumiintiyada samaynta, GCS waxay ku soo celin doontaa lacagta wadarta wax ka yar $ Xareynta $ 125. Haddii amarkan la buriyo kadib marka la sameeyo dukumiintiyada samaynta, GCS waxay ku soo celin doontaa tirada guud ee amarkan wax ka yar $ 195 dollar khidmadda la bixinayo iyadoo la siinayo dukumintiga dhismaha mar horeba aan loo gudbin dowladda. Amarka shirkadeed ee ka baxsan Mareykanka, haddii GCS ay oggolaato soo-celinta ugu badnaan waa qadarka la bixiyay wax ka yar $ 495 ama boqolkiiba labaatan qiimaha iibka. Intaas waxaa sii dheer, lacagta la siiyay GCS oo horey dowladda loogu siiyay diiwaangelinta, la-hawlgalayaasha, alaab-qeybiyeyaasha ama kharashyada kale ee lagu fulinayo amarkaaga lama soo celin karo, oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidneyn, khidmadaha kaararka deynta.
Marka shirkad ama dukumiinti loo diro dowladda si ay ugu xareyso magaca macaamilka ama la aamino ama dukumiinti kale la diyaariyo amar lama soo celin karo ama lama noqon karo.
Ujro $ 75 ayaa lagu dari doonaa jeegaga oo dhan oo loo celiyay GCS sababtuna tahay maaliyad aan ku filnayn ama akoonada xiran. Intaa waxa u dheer, khidmadda adeegga bangiga ayaa laga qaadi doonaa jeegaggaas.
Intaa waxaa sii dheer, inta GCS ay ku bixi doonto dadaallo badan oo lagu dejinayo macaamiisheenna, qalad farsamo ama aadane ayaa dhici kara. Sidaas darteed, haddii sabab kastoo ay tahay codsashadaada, codsashada qaabdhismeedka LLC, codsashada aaminaadda, raadinta calaamad ganacsi ama dalabka dalabka asturitaanka ama codsi kale oo aan macquul ahayn dib loo dhigo, la burburiyo, si khaldan loo muujiyo, ama haddii kaleba la waayo, GCS MA LAHAYN KHATARIN KHATAR AHAAN, AQOONSAN, AMA SHAQADA KHATARTA. LACAG LA'AANTAADA LACAG LA'AAN EE GCS waxay noqoneysaa MACLUUMAAD dhameystiran oo waxkasta oo khidmadaha ah ee loo siinayo GCS adeegyadeena sida lagu sheegay shuruudaha iyo shuruudaha.
Haddii ay dhacdo in amar deg deg ah la dhigay, waxaan sameyn doonaa dadaal kasta si aan u dhameystirno xereynta shirkada iyada oo la raacayo dalabkaaga. Sababtoo ah GCS waxay sameyneysaa dadaal kasta si ay u hubiso dhammaystirka iyo dhammaystirka feylkaaga shirkadda, dammaanad kama qaadno in amarkan lagu xareyn doono waqtiga aad codsatay. Haddii ay dhacdo in amarkaaga degdegga aan la xarayn waqtigiisa, xallintaada kaliya ayaa lagu xaddidi doonaa u soo celinta khidmadaha dheeraadka ah ee la bixiyay diiwaangelinta degdegga ah.
Haddii aad ku bixisay jeeg fakis, taleefan ka hubso, internetka, ACH ama qaab la mid ah, waxaa lagaa hayn doonaa qabashada dalabkaaga illaa bangigayagu caddeeyo in lacag bixintaada la sifeeyay. Waqtiga caadiga ah waa seddex ilaa shan maalmood oo shaqo, oo aan lagu darin sabtida iyo axadaha ama ciidaha bangiyada. Markan waxay kuxirantahay bangiga mana ahan GCS. Kaliya marka aan helno xaqiijin ah in lacagihii la nadiifiyey ayaan bilaabeynaa socodsiinta dalabkaaga.
GCS waxay ku kacdaa dadaal badan si ay ula xiriirto macaamiisha. Si kastaba ha noqotee, dhammaan farriimaha taleefanka, emaylka ama qaababka kale ee isgaadhsiinta ayaa laga yaabaa inaysan helin jawaab boqolkiiba boqol waqtiga.
Amarka waxaa lagu meeleeyaa waqtiga loo gudbiyo GCS khadka internetka, taleefanka, wajiga ama boostada. Dib-u-habeyn laguma sameyn karo dalabkaaga ka dib marka la soo gudbiyo mooyee marka laga reebo ogolaanshaha hore ee GCS. Marka la helo rukhsaynta hore, dib-u-habeynta amarka ayaa ansax ah oo keliya kadib markii GCS ay hesho codsi qoraal ah oo kaa saxeexan adiga oo adeegsanaya wajiga. Waxaa jira kharashyo maaliyadeed iyo waqti si ay u fuliyaan amar. Sidaa darteed, codsi kasta oo baajinta waa in la soo gudbiyaa oo nalaga helo iyada oo la diwaangelinayo soo celinta waraaqaha soo celinta ee la codsaday ama foomka xiriirkeena ah https://companiesinc.com/ 24 saacadaha shaqada ka hor inta aanan u dirin amarkaaga hay'adda dowladda si loo xareeyo ama ka hor inta adeegga uusan noqon. lasiiyay. Saacadaha ganacsiga inta badan maalmaha shaqada waa 6: 00 AM illaa 5: 00 PM PST marka laga reebo ciidaha qaranka.
Shuruucda qaarkood waxay kaa rabaan inaad keento dukumiintiyo dadaalaad macquul ah kahor intaan shirkadda la gudbin ama aan la keenin. Dukumiintiyadaan waxaa ka mid noqon kara laakiin aan ku xaddidneyn nuqul nootaayo ah oo ah baasaboor, biil adeegsi asal ah, bayaanno bangi, iyo / ama warqad tixraac bangiga. Gobollada qaarkood, waan fayl gareyn karnaa laakiin si sharci ah uma gaarsiin karno shirkaddaada illaa aad ka keento dukumiintiyada. Xeerarka kale ee aan lacag ka bixinno laakiin fayl gareeyn karno shirkaddaada illaa aad ka keento dukumiintiyada loo baahan yahay. Hawlaha qaar waxay u baahan yihiin fikrado sharciyeed. Dukumiintiyada qaarkood waxay u baahan karaan in loo turjumo Ingiriis ama luqad kale. Haddii ay jiraan ajuuro loogu talagalay shuruudahan dheeraadka ah, adiga ayaa mas'uul ka ah iyaga. Waxaan ku nuux nuuxsaneynaa kharashka ku baxa sameynta shirkada sida khidmadaha dowladda iyo wakiilka, ajuuradaas annagana dib looma soo celin doono. Adiguna, adigu, waxaad oggoshahay inaad mas'uul ka tahay bixinta dukumiintiyada dadaalka habboon ee loo baahan yahay, iyadoo aan loo eegin codsiga, iyo in lacag celinta aan la heli karin haddii aadan u hoggaansamin sharciga dadaalka habboon.
Ku qanacsanaanta macmiilka waxaa loola jeedaa mid ama in ka badan waxyaabaha soo socda: (1) in dukumiintiyada loo aqbalo xareynta iyo faylka ay ku shaabbadeyso hay'ad dowladeed, ama (2) dukumiintiyada la dalbaday waxaa la keenay ama lagu keenay side gude caadi ah, keenis elektaroonig ah ama qaab kale ama (3) in adeegyada la dalbaday la fuliyay. Haddii mid ka mid ah waxyaabaha kor ku qoran ay run yihiin qayb ka mid ah amarku, waxaad ku raacsan tahay inaad ku qanacsan tahay amarka oo dhan.
WAA KA QURUXDA DHAMMAAN CAYMISYADA, U DIRIDDA AQOONTA AMA LACAG KA MID AH, DHAQANKA AMA UJEEDADA UJEEDDADA UU KU SAABSAN YAHAY. Awoodda qawaaniinta qaarkood ma oggolaaneyn ka-saarisyada dammaanadda ku-saleysan, sidaa darteed ka-saarista kore ma ku khusayso.
KHUDBADAHA LACAG LA'AAN
Waxaa jiri kara ajuuro dheeri ah oo dowladeed ama ajuuro kale oo sababi kara ka dib marka shirkaddaada ama dukumiinti kale la abuuro ama la gudbiyo oo / ama laguu wareejiyo. Tusaale ahaan, Gobolka Nevada ee Mareykanka wuxuu u baahan yahay liistada saraakiisha la soo gudbiyo wax yar ka dib marka la soo diro shirkadda. Iyada oo qoraalkan la adeegsanayo khidmadda xaraynta ayaa ah $ 150 oo lagu daray $ 500 khidmadda shatiga ganacsiga. Tusaale kale ayaa ah in Gobolka Kaliforniya uu leeyahay canshuuro labanlaab oo loogu talo galay sannadlaha ah oo xaddiyo kala duwan ah oo ku xiran dakhliga shirkadda la saadaaliyay. Haddii aad soo iibsatay shirkad duug ah / shelf, lacagta dib u cusbooneysiinta ayaa laga yaabaa inay ugu dambeyntii dhacdo taariikhda aad iibsatay. Sababtoo ah khidmooyinkaani kuma xirna markii ugu horreysay ee ay shirkadda xaraysay, GCS laga yaabee ineey kugu dallacdo shuruudahan soo socda ee xereynta ah ee khidmadaha bilowga ah ee caadiga ah. Waxaa lagaaga baahan doonaa inaad daboosho gobolka ku xiga, dalka, wakiilka iyo / ama ajuurada kale kahor taariikhda loo qabtay si aad shirkaddaada ama hay'ad kale ugu sii haysato meel wanaagsan gobolka ama dalka la asaasay. Waxaa sidoo kale guud ahaan lagaa rabaa inaad haysato wakiil diiwaangashan oo u adeegaya howlaha sharciga ee gobolka ama wadanka ku soo biirista iyo awooda kasta oo ay shirkadaadu leedahay, marka loo eego awooda ay leedahay, inay ganacsi ka sameyso. Haddii GCS ay kugu soo dallacdo cusboonaysiinta hay'addaada sharciga ah, waxaan u jeednaa inaan si wanaagsan wax u qabanno ka hor taariikhda loo qabtay. Taasi waa sababta oo ah waxaa jira ganaaxyo, khidmadaha daahdinta, ganaaxyada iyo / ama kala noqosho lagu soo rogo shirkadaha markii la xareeyay. Bixinta qaansheegadka goor hore waxay ina siineysaa barkimooyin ka caawiya kahortagga dowladda ama hay'ad kale cawaaqibka ka dhalan kara feylasha dambe. Waa masuuliyadaada mana ahan tan GCS inaad ku ilaaliso qalabkaaga sharci meel wanaagsan. Waxaa jira ajuurada dib u cusboonaysiinta ee aaminka caalamka oo ay ka mid yihiin, laakiin aan ku koobnayn, ammaaneynta iyo khidmadaha dowladda. Marka qoraalkan la joogo khidmadda adeegyada wakiilka diiwaangashan waa $ 189 sanadkii kasta oo loo sameeyo gobol kasta oo Mareykanka ah iyo $ 245 sanadkiiba gobol kasta oo Kanadiyaan ah. Lacagta dib u cusbooneysiinta ayaa ku kala duwan dalal kale. Haddii aadan ku bixin ajuuradaada cusboonaysiinta dowladda oo ay shirkaddaadu gasho qaab dowladeed oo sharaf dhac u ah dowladda (ereybixinta ay ku kala duwan yihiin dowlad goboleedku), taasi waa caddeyntaada inaadan rabin shirkadda. Haddii aadan ku wargalin GCS haddii kale qoraal ahaan ka hor sumcaddiisa ay ku oggol tahay qoraal ahaan maamulka, waxaad GCS siisaa rukhsad ay ku meeleeyaan shirkadda aad muujisay inaadan rabin in lagu iibiyo shirkad da 'ah, wax ka badasho magaceeda iyo / ama dib u soo celiya meeshii ay taagnaayeen.
SHURUUDAHA KU SAABSAN SHAQADA
Shuruucda gobolka qaarkood waxay u baahan yihiin shirkad inay ku daabacdo jiritaankeeda joornaal loo qoondeeyay. GCS ayaa laga yaabaa, ikhtiyaarkeeda kali ah, inay u qabato hawshan macmiil, gaar ahaan haddii looga baahdo ku-duwaha ama qaban-qaabiyaha hay'adda. Bayaanka websaydhka ku saabsan saamaynta qaab dhismeedka "Qiimaha waxaa ku jira khidmadaha daabacaadda halka loo baahdo" waxaa loola jeedaa halka looga baahan yahay ku-duwaha ama qaban-qaabiyaha. GCS ma daabacidoonto mana bixin doonto khidmadaha daabacaadda gobollada qaarkood, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn, shuruudaha daabacaadda ee Shirkadda Waajibaadka Xaddidan ee New York. Waxaa lagugu soo ogeysiiyay inaad ogaato haddii aad codsato sameynta New York LLC in shuruudaha daabacaaddu ay aad uga qaalisan yihiin qaabeynta bilowga ah ee LLC lafteeda adiguna adiga ayaa mas'uul ka noqon doona lacagahaas.
SHARCIYADA SHARCIYADA ama MAAMULKA IYO DIIWAANKA
GCS waa adeega daabicista internetka. Qalabka ku jira websaydhkan waxaa ku jira macluumaadka dalabka guud ee loomana doonayo in lagu beddelo talooyinka qareenka. In kasta oo shaqaalaheenu ay ku bixiyaan dadaal badan sidii ay u ilaalin lahaayeen una daabici lahaayeen macluumaadka saxda ah, Gobollada, Gobollada iyo Shuruucda federaalku waa kuwo firfircoon oo si joogto ah u soo baxa. Intaas waxaa sii dheer, sharciyada waxay u furan yihiin fasiraad kala duwan waxayna aad ugu kala duwan yihiin awoodaha kaladuwan.
Markaad adeegsaneyso adeegyadeena, waxaad u dhaqmeysaa sidii qareen kuu gaar ah. GCS waxay dhammeystirtaa macluumaadka foomamka looga baahan yahay iyadoo lagu saleynayo macluumaadka aad na siisay soo gudbintaada 'Codsiga shirkad' ama "Qaababka LLC" waxayna faylkaa buuxisaa shuruudaha ku habboon gobolka, hay'ad goboleed ama hay'ad federaal ah. Iyada oo ku siineysa adeeggan, GCS, la-taliyayaasheeda, wakiillada, wakiillada, iyo shaqaaluhu ma bixiso wax sharci ah, canshuur ama haddii kale talobixin xirfad ama adeeg, iyo ma jiraan wax matalaya ama dammaanad qaad ah, oo la muujiyey ama la macno ah, la bixinayo oo ku saabsan sharciga ama cawaaqibka kale taasoo ka dhalatay adeegsiga adeegyadeena ama qaababkeenna.
GCS, la-taliyayaasheeda, wakiillada, wakiillada, iyo shaqaaluhu kuma hawlaan ku dhaqanka sharciga mana ku siin karaan talo sharciyeed. In kasta oo GCS ay ku baxdo dadaallo badan ayna ixtiraamto dabeecadda qarsoodiga ah ee macluumaadka aad noo soo gudbineyso, MA JIRO XANUUNKA GAARKA AH ama mudnaanta u dhexeeya GCS iyo adiga, oo ay ku jirto laakiin aan ku xaddidnayn xiriir kasta oo Xeer Ilaaliye ah oo jiri kara haddii aad kala tashatid qareen shati leh. .
Haddii aad la hadasho qareen xiriir la leh GCS, waxaad ku raacsan tahay in aan loo qaadan doonin in talo qaanuuneed loo qaato kiis kasta ama xaalad kasta. GCS iyo / ama qareenada xiriirka la leh waxay bixiyaan macluumaad guud oo keliya, maahan la taliyayaal canshuur, mana laha mana ku siin doonaan wax sharci ah, canshuur ama talo bixin laxiriira oo ku saabsan adeegyadeena. Waxaad u baahan doontaa inaad raadsato talo-bixin xirfadeed oo madax-bannaan iyo talo-bixin canshuureed. Intooda badan ama dhammaan hay'adaha abuuray GCS waxaa loogu talagalay inay noqdaan dhexdhexaad cashuureed oo wixii dakhli kasto, ha ahaato mid gudaha ah ama mid caalami ah, waa la soo sheegi karaa sanadka la kasbaday iyadoon loo eegeynin iyo inkale lacagahaas oo kale oo lagala noqday hay'adda ama dib looma celinayo kiiska. Hay'adaha caalamiga ah. Dheeraad ah, macluumaad kasta oo laga helo GCS iyo / ama shirkadaha ku lugta leh iyo / ama qareenka (s) looguma talagalin in la abuuro, lagana doodo, la helo, la daawado ama agaasime kale ama is dhexgalka aan tooska aheyn, xiriirka qareenka iyo macmiilka iyo wixii khidmad ah ee la bixiyo looma tixgelin doono khidmadaha sharciga ah.
Sida dhammaan arrimaha ganacsiga muhiimka ah, GCS, la-taliyayaasheeda, wakiillada, wakiillada, iyo shaqaaluhu waxay si xoog leh kugula talinayaan inaad la tashatid qareen shati u leh ku-dhaqanka sharciga iyo CPA shati leh ee ku habboon qaanuunka la xiriira sameynta shirkaddaada, LLC, aaminaad ama badeecad ama adeeg kale oo aan bixinno iyo howlihiisa socda.
Lacagaha, Lacagta iyo SHURUUDAHA
Iyada oo tixgelin la siinayo adeegyada aad dooratay, waxaad ogolaatay inaad na siiso khidmadaha khusaysa adeegyada (yada). Dhammaan khidmadaha lagu bixin karo halkan dib looma bixin karo haddii aan si kale bixinin mooyee. Iyada oo tixgelin dheeraad ah la siinayo Adeegyada, waxaad oggolaatay inaad: (1) bixiso macluumaad gaar ah oo hadda jira, oo dhammaystiran oo sax ah oo adiga kugu saabsan sida ay u baahan tahay nidaamka dalbashada iyo (2) joogteynta iyo cusboonaysiinta macluumaadkan sidii loogu baahdo in lagu hayo, mid dhammaystiran oo sax ah. Dhammaan macluumaadka noocaas ah waxaa loo gudbin doonaa macluumaadka akoonka ("Macluumaadka Akoon").
Waxaad halkan na siineysaa xuquuqda aan u siineyno dhinacyada saddexaad macluumaadka Macluumaadka. Dhameystirka iyo soo gudbinta arjiga diiwaangelinta magaca shirkadda, waxaad mataleysaa in Macluumaadka Akoonka ee arjigaaga uu sax yahay iyo diiwaangelinta Magaca Shirkadda la xushay, illaa iyo inta aad ka warqabtaan, ma faragelinayso ama kuma xadgudbeyso xuquuqda seddexaad kasta. xaflad. Waxaad wakiil u tahay in magaca shirkadda aan loo diwaan-galin ujeedo sharci darro ah mooyee.
Haddii aad codsato saamiyo la oggol yahay oo kujira Mawduucyadaaga Isboortiga in ka badan tirada ugu badan ee saami qeybsiga ay oggol yihiin gobolka faylka xereynta, gobolka ama waddanka ugu yar khidmadda xereynta, adiga ayaa mas'uul ka ah wixii kali ah iyo khidmadaha canshuurta ee soo gala waqti kasta. . Qaar, laakiin maahan dhammaan, xukumaduhu waxay ku dallacaan ujrooyin dheeri ah oo fayl ah marka tirada saamiyada iyo / ama wadarta qiimaha saamiga ay kordhayaan. Adiga ayaa mas'uul ka ah inaad baarto tirada ugu badan ee saami qeybsiga ee u oggolaaday gobol, gobol ama waddan si ay ugu qalmaan khidmadda ugu yar ee xareynta. Tirada saamiyada la oggol yahay ee kujira Mawduucyada Iskaashatada waxaa lagu xushay ikhtiyaarkaaga kaliya. Haddii aadan si kale noo dhigin, qaabdhismeedka saamiga caadiga ah waa saamiyada 1500 oo aan qiimo laheeynin mooyee haddii lambarrada dhaqanku ay ku kala duwan yihiin awood gaar ah ama saamiyada ka yar ay u qalmaan khidmadda xaraynta ugu yar.
Markii ay quseyso, GCS waxay dukumiintiyada u gudbisaa xafiiska dowladda ee ku habboon si ay u gudbiso. Marka GCS ay dukumiintiyada ka soo celiso xafiiska dowladda, GCS, ayaduna, dukumiintiyada adiga kuu soo diraysa iyada oo la raacayo xirmada aad dalbatay. Waxaad ku raacsan tahay in xafiiska dowladda, oo uusan ahayn GCS, uu xakameynayo waqtiyada dukumiintiyada shirkadda lagu xareeyo oo dib loogu celiyo GCS.
Marka la xaraysto ka dib, haddii xirmo shirkadeed ama buugga diiwaanka shirkadaha lagu soo daro amarka, waa in la soosaaraa ka dib markii magaca shirkadda ay soo gudbiso oo ay oggolaato dowladda. (Sababta tan ayaa ah in ay tahay wax aan macquul aheyn in la dalbado xirmo shirkadeed illaa ay dowladdu ka oggolaaneyso magaca si xirmo aan loogu abuurin magac ay dowladdu diiday.)
WARBIXINTA iyo SHURUUDAHA SHURUUDAHA
GCS mas'uul kama aha inay kaala taliso ama ku xasuusiso wixii shuruudo ah ama waajibaad ah, oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn wixii warbixinno sanadeed ah, diiwaangelin canshuureed, canshuur bixin, ama gobol, gobol, degmo ama shuruudaha daabacaadda federaalka ama ajuurada la xiriirta sheyga ama adeegga aan ku siin. Laga soo bilaabo qoraalkan waxaa jira 3,007 gudaha Mareykanka oo leh shuruudaha fayl gudbinta oo kala duwan iyo ajuurada. Sababta oo ah tirada degmooyinka iyo awoodaha kale iyo xeerarka waligood isbedelaya, waa adiga masuuliyadaada inaad baarto khidmadaha xaraynta, canshuuraha iyo shuruudaha kale ee degmadaada, kaniisaddaada, gobolkaaga, ama awooda kale ee laxiriirta. Ku lug lahaanshaha GCS ee badeecadaada ama adeeggaaga ayaa joogsada waqtiga wax soo saarkaaga ama adeeggaaga la abuuro. Shuruudaha iyo waajibaadka dayactirka alaabadaada ama adeeggaaga MA AHA mas'uuliyadda GCS oo adiga ayaa mas'uul ka ah adiga. Gaar ahaan, illaa aad qandaraas ku siisay GCS inuu sidaas sameeyo, wax kasta iyo dhammaan gobollada, gobolka, degmada ama shuruudaha daabacaadda federaalka ee la xiriira shirkaddaada, LLC ama alaabada kale ama adeegga ayaa mas'uul ka ah adiga keliya. Tan waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn, xereynta xaladda doorashada ee Shirkadda 'S S'. Foomka lagu codsanayo heerka S-Corporation waa inuu saxeexo sarkaal ka socda shirkaddaada. Maaddaama aan sarkaal ka ahayn shirkaddaada ma saxeexin karno faylkan. Xitaa haddii la soo magacaabo sarkaal / agaasime / adeegyada maamulaha, looma baahna inaan fayl gareynno foom noocan ah ama tallaabo kama qaadi karno annagoo ka wakiil ah shirkadda mooyee ciddii ku habboon oo qoraal ah mooyaane. Annagu mas'uul kama nihin masuuliyada maqnaanshaha ama foomka canshuurta ee soo daahay ama codsiyo kale, ficillo ama wax qabad la'aan haddii si ula kac ah loo khiyaaneeyo, oo ay dhacdo in magacaabista, ee aan ahayn GCS, ay mas'uul ka tahay. GCS waa adeega diyaarinta iyo xereynta dukumintiga mana ahan canshuur ama shirkad sharci. Canshuuraha iyo baahiyaha sharciyeed waa in lagu helaa iyada oo loo marayo shati, aqoon leh, ku shaqeysta xubnaha xirfadahan sida qareenada iyo xisaabaadka.
Haddii, lacag dheeri ah, oo aad codsato kaalmadeena furitaanka akoon bangi, waxaan sameyn doonaa dadaal si aan u furno koonto qancinaysa baahiyahaaga. Si kastaba ha noqotee, waxaad ku raacsan tahay in GCS aysan xakameyneynin adeegyada ay bixiso bangiga ama bangiyada midkoodna uusan furi doonin ama uusan furi doonin nooca koontada aad rabto, iyo dadaalkaaga dhameystirka dukumiintiyada bangiga ee loo baahan yahay. Waxaad ku raacsan tahay in bangiga, laakiin aan ahayn GCS, uu xakameeyo xawaaraha xisaabta bangiga la furi doono ama aan la furi doonin. Waxaad ku raacsan tahay inaad mas'uul ka tahay buuxinta arjiga furitaanka akoontada gebi ahaanba iyo bixinta dhammaan macluumaadka bangigu ka codsaday furitaanka akoonka.
Badanaa waa danahaaga ugu fiican in aadan la xiriirin bangiga illaa iyo inta akoonku furan yahay. Sababta oo ah waxaan aragnay macaamiisha marar badan oo bayaan ka dhigaya bangiga ama aan ula xiriirno bangiga qaab ay uga horjoogsanayaan furitaanka xisaabta.
Waxaad ogolaatay inaad qabato GCS dhib la'aan siyaasadaha iyo shuruucda bangiga oo ay ka mid yihiin, laakiin aan ku xaddidnayn, kuwa soo socda: bangi diidaya furitaanka akoon, bangi waqti badan ku qaata inaad akaantiga furato intii aad rabto, bangiga oo macluumaad badan ka doonaya bangi. way furi doontaa koontada, isbeddelada siyaasada bankiga, awood la'aanta in akoon looga furo banki leh laan-socod ku habboon, baahida loo qabo in dhigaalka iyo ka-noqoshada boostada lagu diro halkii ay bananka ku jiri lahaayeen, dhigaal-kaydintu waxay qaadanaysaa waqti dheer in la caddeeyo macaamilku doonayo, luqadda ajnabiga ah ee loo isticmaalo bangiga, bangigu ma bixiyo dhammaan adeegyada uu macmiilku doonayo, oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn awoodda ay lacag uga diraan akoonka ama joogitaanka ama maqnaanshaha amaahda ama kaararka deynta ama jiritaanka ama maqnaanshaha marinka internetka ee akoonka, ama bangiga kaa doonaya inaad u safarto bangiga shaqsi ahaan kahor intaan koontada la furin. Haddii uu bangigu u baahan yahay socdaal waxaad si buuxda mas'uul uga tahay wixii socdaalka iyo kharashyada la xiriira ah. Xaaladaha qaarkood, doorashada kaliya ee macquul ah ayaa ah in laga furo akoon bangi aan lahayn laamo-lugo ku habboon macaamiisha ama banki aan lahayn laamo-lugo. Haddii kani yahay nooca xisaabta GCS ay kuu furan karto, waxaad ogolaatay in GCS ay fulisay waajibaadkeeda.
Si kasta oo ay tahay GCS waajib kuma aha inay dib u soo celiso khidmaddii oo dhan ee lagu bixiyay alaabada iyo adeegyada dheeraadka ah ee la soo iibsaday marka lagu daro xisaabta bangiga sababta oo ah koontada bangigu ma awoodin in la furo ama haddii aadan ku qanacsanayn doorashada bangiyada. Tani waa kiiska xitaa haddii sababta ugu weyn ee aad u sameysay hay'ad sharci ama adeegyo la amray inaad la xiriirto ay ugu talagashay furitaanka koonto banki ama in waqti kama dambeys ah oo la seegayay ay sabab u tahay daahitaanka furitaanka koontada. Tusaale ahaan haddii aad amartay LLC iyo koonto bangiga oo bangiga aad dooratay uu diido furitaanka akoonka, xalka kaliya ayaa iska leh GCS, ikhtiyaarkeeda, si loogu celiyo kaliya qeybtaas khidmadda la bixiyay ee GCS qadiyadeeda laxiriirta koontada bangiga. furitaanka, kharashyada ka yar iyo waqtiga kugu soo dhacay, ama ku siinaya ikhtiyaar bangi oo kale. GCS waxay sameysay daraasad balaaran si loo helo bangiyada xisaabaadka ka furi doona adigoon joogin, taas oo la dareemayo inay yihiin hay'ado xasiloon oo bixiya adeeg macquul ah. Adiga ayaa mas'uul ka ah inaad buuxiso arjiga xisaabta bangiga, inaad siiso taxaddarka loo baahan yahay iyo inaad keentid dukumiintiyo kale oo uu banku codsaday. Bangiyada waxaa looga baahan yahay inay macaamiishooda ka baaraandegaan falalka sharciga iyo anshaxa. Ku guuldaraysiga in sidaas la sameeyo waxay sababi kartaa in bangigu lumiyo laysankiisii ​​iyo / ama xaddido awooda ay u leedahay inay ku sameyso macaamil ganacsi caalami ah. Marka, baananka laguma yaqaan sameynta ka reeban shuruudahooda ku-shaqeynta.
Shuruudaha furitaanka bangiga caadiga ah waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn, dhammaystirka arjiga xisaabinta, saxeexidda kaarka saxeexa, bixinta nuqul aan nootaalo ahayn oo ah baasaboor, biil adeegsi asal ah oo wata cinwaanka gurigaaga, dukumiintiyada shirkaddaada, bangiga iyo / ama tixraac xirfad leh warqad iyo shuruudo kale oo ku xiran hadba bangiga. Bangigu badiyaa way soo wici doonaan si ay u hubiyaan xaqiiqada dukumintiga. Adigoo ku siinaya magacyada bangiga GCS waxay umuuqataa sida ugu macquulsan uguna dadaal badan si ay kuugu siiyaan dukumintiga furashada akoonka bangiga, GCS waxay gutay waajibaadkeeda sida ku xusan heshiiskan.
Haddii aad amartay waxyaabo ama adeegyo dheeri ah, dheeraad, nuqul ah, dukumentiyo taxaddar leh ayaa loo baahan karaa. Tusaale ahaan, haddii aad amartay koonto bangi, sharciga wuxuu u baahan karaa bangiga inuu sii wado asalkaaga aqoonsiga iyo dukumintiga tixraaca. Xeerarka ayaa sidoo kale u baahan karaya ammaano hayaha ama adeeg bixiyaha shirkadda inay lahaadaan dukumiinti asal ah oo taxaddar leh. Marka, waxaad u baahan kartaa inaad bixiso noocyo badan oo asal ah.
AQOONSIGA, DIIWAAN GALKA & DIIWAANKA
Xeerarka maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ahba waa la hayaa si looga hortago in lacagta la dhaqay iyo dekeda kale ama dhaqdhaqaaqa lacagaha sharci darrada ah. Sida oo kale, ammaaneyaasha, bangiyada iyo kuwa kale ee ku jira warshadaha adeegyada maaliyadeed ayaa looga baahan yahay inay aqoonsadaan dhinacyada ku habboon inay u hoggaansamaan shuruucdan oo markaa marka codsiyada bixitaanka ama codsiyada kale la sameeyo, waxyaabaha qiimaha leh waxaa loo wareejiyaa dhinacyada ku habboon. Sidaa darteed, waxaa jira shuruudaha aqoonsi-macmiilkaaga oo ay tahay in la buuxiyo. Ammaano-hayaha guud ahaan ma sameyn doono wax ka-reeban shuruudaha ku-shaqeynta saxda ah sababta oo ah marka sidaas la sameeyo waxay ku dambayn kartaa ganaaxyo iyo / ama luminta laysanka si ay u qabtaan ganacsi.
Liistada soo socota waa qaar ka mid ah, laakiin qasab ma ahan, dhammaantood, dukumentiyada sida caadiga ah looga baahan yahay macmiilka si loo sameeyo aaminaad caalami ah: Foomka Xogta Qiimeynta Macmiilka, Qoraalka Dhaarta, Caddaynta Ilaha Lacagta, Dukumintiga Macluumaadka Aaminta, Lacagta Sharciga Kordhinta Maareynta Dhaqaalaha, Shaqo La'aanta, Nuqul bogga sawirka ah ee baasaboorkaaga (ama koobi liisanka darawalkaaga mararka qaarkood waa ku filan tahay) oo ay sharciyeeyaan Nootaayo Dadweyne, caddeyn dukumiinti asalka ah oo cinwaankaaga ah (waa inuu noqdaa mid asal ah oo asal ah) biilka adeegga, caddeynta kaarka deynta ama caddeynta bangiga - waa inay asalka ahaadaan halkii sawir-qaabeyn), Warqadda tixraaca bangiga. Waxaa lagaa codsan doonaa inaad saxeexdo qaar ka mid ah dukumiintiyada kor ku xusan oo aad dhiibto nuqul baasaboor sida kor lagu soo sheegay, biilka tamarta (ama wixii kale ee la sheegay) iyo warqad tixraac bangiga. Liistada kor ku xusan waxaa loola jeedaa in lagu bixiyo tusaale ahaan dukumentiyada sida caadiga ah loo baahan yahay laakiin dammaanad qaad lama helin in dukumiintiyada kale aan loo baahnayn iyo / ama codsiyada kale la sameeyo.
Adiga ayaa mas'uul ka ah inaad bixiso macluumaadka dhammaystirka aaminaadda, oo ay kujirto aaminaad dhul, aaminaad ku noolaanshaha iyo dukumiintiyo kale, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn dukumintiga deynsashada iyo sidoo kale inaad na siiso magacyada hay'adaha. Waxaan ku guda jirnaa shaqada diyaarinta waxaanan la galnaa kharashyo kahor intaadan bixin macluumaadka si aad u dhameystirto dukumiintiyadaada. Marka, ku guuldaraysigaaga inaad bixiso macluumaadka aan u baahan nahay inaan ku soo galno macluumaadkaaga dukumiintiyada maahan sabab dib loogu soo celiyo sababtoo ah kharashyada diyaarinta ah ee lama-huraanka ah.
Akoonnada kaararka amaahda ayaa loo isticmaalaa inay ku dallacaan macaamiishaada ku bixiya kaarka deynta. Haddii, lacag dheeri ah, aad dalbatid kaalmadeena furitaanka akoon kaar kaar ah kaarka deynta, waxaan sameyn doonaa dadaal si aan u furno koonto qancinaysa baahiyahaaga. Si kastaba ha noqotee, waxaad ku raacsan tahay in GCS aysan xakameyneynin adeegyada ay bixiso shirkadda xisaabta ganacsigu, sicirka la bixiyo, ama ganacsatada aysan furi doonin ama aysan furi doonin nooca koontada aad rabto, iyo dadaalkaaga aad ku dhammaystireyso dukumiintiga akoonka ganacsiga ee loo baahan yahay. Waxaad ku raacsan tahay in shirkadda xisaabta ganacsigu, laakiin aan ahayn GCS, ay maamusho xawaaraha ay ku socoto koontada ganacsigu furmayo ama aan la furi doonin. Waxaad ku raacsan tahay inaad mas'uul ka tahay buuxinta arjiga koontada ganacsigiisa gebi ahaanba iyo bixinta dhammaan macluumaadka laga codsaday furitaanka akoonka.
GCS MA AHA IN LAGU QAADO XARUNTA XARUNTA XAALADAHA AMA SHURUUDAHA. GUDDIGA MADAXWEYNE SI AY UGU SAMEEYSAAXARKA MACLUUMAADKA KA DAMBEEYA KA DIB MARKA AY DIIWAAN GELIYO CODSIGAAGA. WAA INAAD OGOLAATO IN GCS UU KA XISAABIN XAALADA KHUDBADAHA LAGU QAADO HESHIISKA MERCHANT.
Waad ogolaatay inaad qabato GCS dhib la'aan siyaasadaha ganacsiga iyo shuruudaha oo ay ka mid yihiin, laakiin aan ku xaddidnayn, kuwan soo socda: shirkad akoon ganacsi ayaa diidaya furitaanka akoon, shirkad akoon ganacsi ayaa ku qaadata waqti badan si ay ugu furato koonto halkii aad rabto, koonto ganacsi. shirkada oo codsata macluumaad dheeri ah ka hor intaysan furin koontada, akoonka bangiga ee looga baahan yahay bilowga, isbeddelada xagga siyaasada, awood la'aanta inaad furato koonto leh qiimaha aad rabto, awood la'aanta inaad ku furato akoonka ganacsatada shuruudaha aad rabto, shirkada koontada ganacsiga. Bixinta dhammaan adeegyada ama qiimeyaasha uu macaamilku doonayo, oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xadidnayn, ajuurada, kaydka, siyaasadaha ganacsiga iyo kuwa kale.
Mararka qaarkooda, doorashada kaliya ee macquul ah ayaa ah in laga furo akoontada ganacsiga shirkad qaadeysa qiime ka sareeya heerarka caadiga ah. Tani waa run gaar ahaan haddii shirkadda xisaabta ganacsigu u aragto ganacsigu inuu yahay mid "khatar sare", iyada oo aan loo eegin in macaamilku dareemayo in ganacsigu uu halis weyn leeyahay ama haddii macaamilku leeyahay taariikh nadiif ah ama diiwaangelin raadraac ah. Haddii kani yahay nooca xisaabta GCS ay kuu furan karto, waxaad ogolaatay in GCS ay fulisay waajibaadkeeda.
Si kastaba ha noqotee GCS waajib kuma aha inay dib u soo celiso lacagta oo dhan ee lagu bixiyo badeecadaha iyo adeegyada dheeraadka ah ee la soo iibsaday marka lagu daro koontada kaarka amaahda maxaa yeelay shirkadda xisaabta ganacsigu ma aysan furi karin ama haddii aadan ku qanacsanayn xulashada shirkadaha shirkadaha akoonnada ganacsiga. . Tani waa kiiska xitaa haddii sababta ugu weyn ee aad u sameysay hay'ad sharci ama amarro adeegyada la xiriira ay ahayd ujeedka furitaanka koonto kaarka amaahda ama in waqti kama dambeys ah la seegay sababtoo ah dib-u-dhigga furitaanka akoonnada ganacsiga. Tusaale ahaan haddii aad ku amartay shirkad iyo koonto baayac mushtar iyo shirkada koontada doorta ay diido inay furato koontada ama ay soo dallacdo qiime ka sareeya midka aad rabto, xalka kaliya ayaa ah GCS, ikhtiyaarkeeda, si ay u soo celiso qeybtaas khidmadda Bixiyay in deymaha GCS ay laxiriiraan furitaanka akoonka ganacsiga ama qeyb kamid ah khidmadda la sheegay, in kayar kharashyada jeebka, ama ay ku siiso ikhtiyaar kale xisaabta ganacsiga. Khidmadda la bixiyo aasaasida akoon ganacsi ayaa la siiyaa dadka saddexaad si ay u sameeyaan qiimeyn halista ah, sidaa darteed inta badan lacagta la bixiyo si loo aasaasay ganacsade si buuxda looma noqon karo. GCS waxay sameysay daraasad balaaran si loo helo shirkadaha xisaabaadka ganacsatada ee u furaya koonto xisaabaadka ganacsatada khatarta yar, kuwa dhexe iyo kuwa halista badan, kuwaas oo ay u aragto inay yihiin hay'ado macquul ah oo bixiya adeeg macquul ah. Adigoo ku siinaya magacyada shirkadaha akoonnada ganacsiga GCS waxay u muuqdaan kuwa ugu macquulsan oo dadaal ku bixiya sidii ay kuugu siin lahaayeen dukumiinti furayaal ganacsi ama gudbin ah, GCS waxay gutay waajibaadkeeda sida ku xusan heshiiskan.
Barnaamijka xafiiska, oo caadi ahaan ka kooban lambar taleefan, lambar fakis ah iyo cinwaan ayaa loo bixiyaa si ku habboon oo macmiil kaliya. Lambarka taleefanka barnaamijka xafiiska badanaa waa qadka taleefanka la wadaago oo looga jawaabo shirkado badan. Sidaa daraadeed, kooxda soo waca waa inay ka tagtaa magaca shirkadda ay u wacayaan si aan ugala soconno cidda ay tahay farriinta loo gudbinayo. GCS mas'uul kama ah waraaqaha lumay, wicitaanada taleefanka ee lumay, fakisyada, fursadaha ganacsi ee lumay ama khasaare kasta oo ay doonaan ha ahaadeene. Caadi ahaan, soo-celinta lama heli karo mar haddii adeegga uu billowdo maxaa yeelay GCS ayaa leh kharashka buuxa ee barnaamijka xafiiska hore.
MACLUUMAADKA CORPORATE & AGED / SHELF COMPANY
Shuruudaha Adeeggan ayaa qeexaya baaxadda iyo xaddidnaanta waajibaadka Shirkadda ee Macaamilka iyo Nidaamka Adeegsiga La Aqbali karo ee Adeegyada iyo Alaabooyinka Macaamiil. Shirkadda waa in ay noqotaa garsooraha kaliya iyo kan ugu dambeeya garqaadee xagga tarjumaha heshiiska. Isticmaalidda Adeegyada Shirkadda iyo Waxyaabaha Shirkadda, Macaamilku wuxuu oggol yahay in lagu xaddido shuruudaha lagu qeexay heshiiskan.
Haddii la amro, Shirkadda waxay siisaa Macaamil shirkad ama shirkad deyn xadidan leh. Shirkadda waxay Macaamiisha siin doontaa xirmo soo dhaweyn leh emayl ama soo-diris boosteed. Macaamiilku wuxuu mas'uul ka yahay dhammaystirka xirmada soo dhoweynta iyo ku soo celinta si ku habboon shirkadda. Marka xirmadan soo dhaweynta ah (oo loola jeedo arji iyo / ama dukumiintiyo kale oo la codsaday) uu dhammeystiro Macmiilka oo uu ku soo noqdo Shirkadda, Shirkadda waxay u gudbin doontaa macluumaadka Dun & Bradstreet ujeeddada, laakiin dammaanad kama qaadayso, inay bixiso adeegyadan soo socda. :
1. Waxaad siisaa astaan ​​ganacsi oo sumcadeed mid ama in ka badan oo ah xafiisyada ganacsiga ee ay ku shaqeeyaan.
2. Dardar gal hannaanka dhisida deynta ee Shirkadda ama laxiriiraashadeeda oo bixinaya khidmad dhakhso leh wakaaladda warbixinta deynta (ies) haddii aad kubixisay adeegga daahfuray.
3. Bixi kayd xisaabeed Dun & Bradstreet (D&B) iyo koonto.
4. Abuur 6 warbixinnada amaahda D&B ee ugu weyn.
5. Abuur natiijooyinka 5 D&B iyo qiimeynta warbixinnada 6.
6. U gudbi macluumaadka D&B macluumaadka ay codsadaan si loo abuuro buundooyinka iyo qiimeynta D&B.
7. Ka caawinta macaamiisha sameynta 4-6 tixraacyada ganacsiga ee shirkadda.
8. Lasoco Xeerarka amaahda ee 6 D&B.
Macaamiilku wuxuu sameyn doonaa waxyaabaha soo socda:
1. Si habboon u buuxi xirmada soo dhoweynta oo ku soo celi shirkadda ku xiran.
2. Bixi dhammaan macluumaadka ay weydiisato Shirkadda iyo / ama laxiriira si ay u dhammaystiraan astaanta sumcadda.
3. Raac tilmaamaha Shirkadda iyo / ama kuxirnaanshaha hannaanka dhammaystirka astaanta sumcadda.
Shirkadda da 'weyn ama shirkadda shelf waa shirkad, LLC ama hay'ad kale oo la mid ah oo la aasaasay taariikh ka hor.
ISTICMAALKA ADEEGYADA SHAQAALAHA IYO BILAASHKA WAA KHATARTA UGU SAMEEYAA Macaamilka Macaamiisha. SHAQAALAHA ISBITAALKA MADAXWEYNE SHAQAALAHA, XAALADAHA, XAALADA SIYAASADDA MACLUUMAADKA SADDEXAAD, XEERARKA MACLUUMAADKA AMA SHARCIGA, KELIYA WARBIXIN KU SAABSAN SHAQADA MACLUUMAADKA AMA KHATARTA WUXUU KARKA SHAQADA; MAYA WAA IN AY SAMEEYAAN DACWAD KU SAABSAN DADKA DADWEYNAHA EE UGU SAMEEYAA ADEEGYADA SHAQAALAHA IYO BADBAADADA AMA UJEEDADA, AMA KU SANNAANTA ADEEGYADA MACLUUMAAD AMA SHAQO KU SAABSAN AMA MACAAMADA XARUNTA SHAQADA EE XAALADA QARANKA KALE OO AAD KU SAMEEYSAAN HESHIISYADA HALKAN. HALKAN WAX KASTA OO LAGU SAMEEYAHAY ISBARASHADA, HADDII AY KA SAMEEYAAN DHAQANKA, AMA AQOONTA IN LAGA HELI KARO LACAG KU SAABSAN HADDII AAN KA QAADO AMAAN KA QAADAN KARIN SHAQAALAHA AMA KHATARAHA KALE. Shirkadu maahan wax amaah ah oo loo xilsaaray bixinta hantida maguuraanka ah ee macaamiisha. SHAQAALAHA shirkaddu waxay bixisaa aqoonsi khiyaali ah. Macaamiilku wuxuu mas'uul ka yahay u adeegsiga xisaabinta asaasiga ah ee waajibaadka amaahda sida loo heli karo oo uu u fasaxay macmiilku. LAMBARKA AQOONTA CARRUURTA AMA KHATARKA AH EE SHAQADA / SHAQAALAHU MA OGTAHAN YAHAY Da'da Shirkadda oo MAYNUU AYUU KA QAADAN KARO.
XUQUUQDA UJEEDDADA SANADKA EE SHAQAALAHA EE DACWADUHU KU SAMEEYAHAY Macaamiisha, AMA KALIYA KALIYA, DIIWAAN GALINTA FOOMKA, KASILADA KHATAR kasta oo ficil ku saleysan Xakamaynta, Xadgudubka AMA XARUNTA XANUUNADA, HESHIIS KARO KHATARTA KAMID XAALADAHA MACLUUMAADKA Macaamiisha waxaa bixiya shirkadda. Adeegyada kor ku xusan waxay qaadan karaan ilaa 120 ilaa 180 maalmaha shaqada laga bilaabo taariikhda Macaamiilku soo noqdo oo Shirkadda ay hesho xirmada soo dhoweynta oo sifiican loo soo dhameystiray.
Iyada oo ay dhici karto in ay ku xirnaato QARNIMADA KHUDBADAHA QARSOONKA, Macaamiilku ma oggola inuu la xiriiro XIRIIR KU SAABSAN Hantida Hay'adda oo aan ka hor imaan Waqtiga Dhacdooyinka iyo Ictiraafka qarsoon ee shirkadda. MACLUUMAADKA MACMIILKA WAA IN AY SAMEEYAAN UGU DIYAAR GARAN SHAQADA SHAQADA KA DAMBEEYA FUUXUU UU KU SAABSAN YAHAY MACLUUMAAD MACLUUMAAD. KA HORTAGGA XUQUUQDA QARSOONKA AMA XIRIIRKA XIRIIRKA KHUDBADA XAQIIJINTA MARKA HADDUHU KU SAMEEYAA DHAQANKA KU SAABSAN SHAQAALAHA MACLUUMAADKA MACMIILKA iyo U Xilsaaran Xilgudashada. Shirkadda waxay ku wareejineysaa macluumaadka ku saabsan soo gudbinta xisaabinta khariidad lacageed laakiin ma xakameyneyso xogtooda xog aruurinta, sidaasna kuma xirna xisaabinta ay ku kaceyso inay soo gudbiso xogta, xisaabaadka iyo qiimeynta ay kujirto. WAA LAGA QALIN KARAA HADDII AMA AMA DIIWAANKA AY XIRIIRADA HESHIIS UU KA JOOJIN KARO DARAN. Wixii ajuuro dheeraad ah oo qayb ka ah geedi socodka dhismaha amaahdu waxay mas'uul ka noqon doonaan macmiilka. Waxyaabaha soo socda looma siin doono COMPANY maaddaama ay yihiin adeegyo ay bixiyaan shirkadaha xisbiyada 3rd. Kuwaas waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn D&B dejinta khidmadda u dhexeysa eber illaa shan boqol iyo sagaashan sagaal doolar, xisaabta ganacsiga la dejiyey, qiimaha badeecadaha ka imanaya iibiyaasha, ujrooyinka xaraynta STATE, khidmadaha rukhsadda ganacsiga, taleefanka la dejiyay ama taleefanka kale ee la xiriira. ajuurada, khidmadaha warbixinta deynta shaqsiyadeed, ajuurada bangiga iyo wixii ajuuro kale ah oo caado u ah ku dhaqanka guud ee ganacsiga. Dhamaan waxyaabaha kor ku xusan waa ajuuro ay filanayaan qofkasta oo qorsheynaya inuu ganacsi ku jiro.
Macaamiil wuu fahmay kuna raacsanahay in isaga / iyada ay tahay inay si buuxda ula shaqeeyaan SHAQAALADA wax ka qabashada arintaan, in la sameeyo waxkasta oo lama huraanka ah si loo siiyo shirkada macluumaadka ay weydiisatay shirkada; intaa waxaa sii dheer, in Macaamilku uga tagi doono ADEEGYADA iyada oo loo marayo jihada iyo xakamaynta shirkada ilaa inta heshiiskani dhaqan gelayo, Macaamilkuna ma siin doono macluumaad cid kale ama shaqsiyaadka ku lug leh ama si toos ah ulalama xidhiidho qof kale ama hay'ad kale oo ku saabsan arrinta. marka laga reebo sida uu farayo shirkada HADDII AY MAHADSANID TAHAY MACLUUMAADKA MACALLINKA.
Intaas waxaa sii dheer, Macaamilku wuxuu oggol yahay inuu bixiyo dhammaan waqtiga Macaamiisha ganacsigiisa iyo biilasha / xisaabaadka shaqsiyadeed oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidneyn khadadka amaahda, kaararka deynta, wareejinta xisaabaadka iyo amaahda. Macaamiilku wuxuu oggol yahay inuusan dalban deynta isagoon ogeysiis hore u siinin shirkadda. Macaamiilku sidoo kale wuxuu oggol yahay in wadarta dhibcaha ay shirkaddu shaqaaleysiiso la-taliyeyaal gacan ka geysta helitaanka wadarta dadaallada macaamiisha iyo Shirkadda.
Wixii hadda ka dambeeya, Shirkadda waxay lahaaneysaa xuquuqda dib-u-habeynta Heshiiska waqti kasta iyo waqti ka waqti iyo wax kasta oo wax ka badalid ah waxay si otomaatig ah ugu dhaqmi doonaan sidii dhammaan macaamiisha markii shirkadda ay ansaxisay oo lagu daabacay bogga ku habboon ee bogga https: // Shirkadaha. .com / ama goobta ku xigta maadaama shabakadda la cusboonaysiin karo.
In kasta oo magacaaga ama qofka aad u magacawday uu ka muuqan doono dukumiintiyada shirkadda ku wareejin doona adiga ama qofka aad u wakiishay, waxaad ku raacsan tahay in magacaaga ama qofka aad u wakiishay laga yaabo inuu ka muuqdo maqaallada ku darista ama qodobbada ururka. Waxaa jira dukumenti gaar ah oo shirkadda ku wareejinaya adiga ama wakiilkaaga. Tani waxay aad ugu dhowdahay magaca soo saaraha gawaarida ku hadhsan gaariga, markaa dukumintiga cinwaanka waxaa loo isticmaalay sharci ahaan, wareejin wareeg ah. Sidoo kale, annaga ama wakiilladayadu waxaan sameysanaa shirkad sida soo-saaraha ?? oo ay sameeyaan shirkad mas'uuliyad xaddidan sidii abaabulle u ah ?? ka dibna fuliya dukumiintiyada shirkadda ku wareejinaya. Xaaladaha qaarkood, shirkaddayada ama qofka aan u magacawnay wuxuu noqon doonaa sarkaalka koowaad, agaasime, xubin ama maareeyaha shirkadda. Waxaad ku raacsan tahay in wareejinta shirkadda adiga ay caadi ahaan ka muuqan doonto dukumiintiga wareejinta ee ma ahan qodobbada laftooda.
Haddii aad amartay adeeg ay ka mid yihiin dirista boostada, waxaad bixin doontaa kharashka boostada iyo maaraynta ashyaada laguu soo diray. Lacag dhigis shan iyo labaatan doolarka Mareykanka ah, ama in ka badan haddii aad sheegto, waxaa lagu dari doonaa qiimaha adeegga diristaada. Debaajigan ayaa dib loo cusbooneysiin doonaa markii aad oggolaato. Waxaad sidoo kale noo oggolaatay inaan ku dallacno kaarkaaga deynta faylka si aan ugu daboolno qiimaha dhoofinta ee xirmooyinka.
Waxaa jiri kara ajuuro dheeri ah oo laxiriira amarkaaga oo aan codsan karno kuwa aan ku jirin websaydhkeena. Ujrooyinkaani waxay noqon karaan kharashyo dhoofinta dheeriga ah, sharciyeyn dukumiinti, baakadaha la tashiga, khidmadaha dib u cusbooneysiinta, ama ajuurada kale ama waxyaabaha aan laga fiirsan ee laga yaabo inay la xiriiraan amarradaada ama kordhinta baahida aan ugu xirno kharashyada jeebka ee aan ka warheynay ka hor intaan la daabicin. qiimaha ayaa la cusbooneysiiyay. Cinwaanada websaydhkan iyo websaydhyada xiriirka la leh ayaa laga yaabaa ama inaynan cusbooneysiin. Qaar ama dhammaan wakiilada shirkaduhu waxay ka shaqeeyaan meelaha meelaha fog laga degan yahay halkii ay ka ahaan lahaayeen hal goob ganacsi oo ku yaal bartamaha. Cinwaanada qaarkood ayaa liis garawsan iyo sawiro, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn sawirrada dhismayaasha, oo loo soo bandhigay ujeedooyin taariikhi ah mana matalaan xaaladda hadda jirta. Fadlan hubi inaad la xiriirto wakiil si aad u hesho cinwaanka saxda ah ka hor intaadan diritaanka waraaq u dirin. General Corporate Services, Inc. waxaa markii hore la gudbiyay bishii sideedaad ee sanadka sagaal iyo sagaashan boqol iyo lix gobolka Nevada ee Mareykanka. Mulkiileyaasha shirkada hada leh waxay heleen ama qiyaastii Janaayo sedexaad ee sanadka labo kun iyo sideed. Shirkadda ma aysan ku jirin safka ganacsiga ay hadda ku jirto inta ay noolyihiin. Magaca shirkada waa la badelay shirkana dib ayaa loo soo nooleeyay, waxna looga badalay oo dib loola noqday. Waxaad ogolaatay inaadan ku tiirsaneynin da'da GCS sabab la xiriirta inaad ganacsi nala sameyso. Heshiiskan oo dhan wuxuu saameeyaa dhammaan macaamillada xaadirka ah iyo kuwa mustaqbalka ee labada dhinac.
AQOONSIYADA LAGU SAMEEYO
Waxaad ku raacsan tahay inaan dib u eegi karno shuruudaha iyo shuruudaha Heshiiskan oo aan baddali lahayn adeegyada lagu bixiyo Heshiiskan. Dib-u-eegid ama isbeddel kasta oo la mid ah wuxuu noqonayaa mid dhaqan-gal ah isla markaana dhaqan-gal ah isla markaaba la dhejiyo nooca dib loo eegay. Heshiis ama isbeddel adeegga (yada) ku yaal boggayaga internetka, ama ogeysiin adiga kugu saabsan emayl ama emayl caadi ah. Waxaad ogolaatay inaad fiiriso bartayada internetka, oo ay kujirto heshiiskan, xilliyo kala duwan si aad uga feejignaato wixii dib u eegis ah. Waxaad ku raacsan tahay, inaad sii waddo adeegsiga Adeegyadeena ogeysiiska dib-u-eegis kasta oo ku saabsan Heshiiskan ama isbeddelada adeegga (yada), inaad u hoggaansanayso wax kasta oo ah dib-u-eegis ama isbeddelo.
Waxaad ku raacsan tahay in mas'uuliyadeena oo dhan, iyo daaweyntaada qaaska ah, iyadoo la tixgelinayo adeegyo (yada) kasta oo lagu bixiyo Heshiiskan iyo jebinta kasta ee heshiiskan ay ku egtahay keliya xaddi lacageed ee aad ku bixisay Adeeggaas. GCS mas'uul kama noqon doonto wixii toos ah, aan toos ahayn, shil, khaas ah ama waxyeelo ka dhasha adeegsiga ama awood la'aanta adeegsiga mid ka mid ah Adeegyada ama qiimaha soo iibsashada adeegyada beddelka ah. Sababtoo ah gobolada qaarkood, gobollada ama waddammada ma oggollaan ka-reebitaanka ama xaddidnaanta qaan-garowga cawaaqibka ama waxyeelada shilalka ah, ee ka dhasha gobolladaas, gobollada ama waddammada, qaanaddeena ayaa ku xaddidan illaa sharciga uu oggol yahay. Mar haddii diiwaangelinta magaca shirkadaha la sameeyo, waa kuwo aan la tirtiri karin oo aan la soo celin karin. Kahor intaadan gudbin dalabkaaga, hubi labalabe higgaadin iyo saxsanaanta magaca shirkadaada.
GCS waxay sheegaysaa wax kasta oo dhaca ama mas'uuliyadda ka dhasha, laakiin aan ku xaddidnayn: (1) khasaare ama mas'uuliyad ka dhasha daahitaan helitaan ama carqalad gelitaan; (2) khasaare ama mas'uuliyad ka dhalanaysa keenista xog-bixin ama xog-gaarsiinta khaldan; (3) lumis ama mas'uuliyad ka dhalata falalka Ilaah; (4) khasaare ama mas'uuliyad ka dhasha khaladaadka, ka-tagista, ama khaldannada wax kasta iyo dhammaan macluumaadka lagu bixiyo Heshiiskan.
Waxaad ku raacsan tahay inaannan mas'uul ka noqon doonin wixii khasaaro ah ee diiwaangelinta iyo adeegsiga magaca shirkad diiwaangeliyaha, ama hakinta ganacsiga, ama si kasta oo aan toos ahayn, gaar ah, dhacdo, ama waxyeellada ka dhalan karta nooc kastoo ah (oo ay ku jiraan faa'iidooyinka lumay) iyadoon loo eegayn nooca ficil ahaan qandaraas ahaan, jirdil (ay kujirto dayacaad), ama haddii kale, xitaa haddii nalagula taliyay suurta galnimada waxyeelada noocaas ah.
Waxaad ogolaatay inaad siidayso, sheegto, oo aad hayso, qandaraasleyaashayada, wakiiladeena, shaqaalaha, saraakiisha, agaasimayaasha, milkiileyaasha iyo kuwa aan iska kaashanayno oo aan wax dhibaato ah ka imaanin mas'uuliyadaha oo dhan, sheegashooyinka iyo kharashyada, oo ay ku jiraan khidmadaha qareenka, qeybaha seddexaad ee la xiriira ama ka imanaya Heshiiskan, Adeegyada lagu bixiyo halkan ama adeegsigaaga Adeegyada, oo ay kujirto xad gudub la'aan xad dhaaf ah oo xagga hantida aqooneed ah ama xuquuq lahaansho kale oo qof ama hay'ad, ama ku xad gudubka mid ka mid ah sharciyadayada hawlgalka ama siyaasadaha la xiriira adeegga (yada) la bixiyo. . Haddii GCS loogu hanjabay inay ku habboonaan doonaan dhinac saddexaad, waxaan raadin karnaa ballanqaad qoraal ah oo adiga kaaga saabsan ballanqaadkaaga inaad noo caddeynayso. Ka gaabintaada inaad bixiso dammaanadqaadyadaas waxaa loo tixgelin doonaa inay jebineyso Heshiiskaaga.
Waxaad ku raacsan tahay in ku guuldareysiga u hogaansanaanta qodob kasta oo heshiiskan ah anaga ay noo tixgelin karno inuu yahay jebinta alaabta iyo waxaan ku siin karnaa ogeysiis qoraal ah, oo sharxaya jebinta, adiga. Wixii jabin ah ee adiga kugu saabsan loo maleyn maayo inay cudur daar u tahay maxaa yeelay annagu hore ugama aan dhaqaaqin falcelin taas, ama wixii kale ee adiga kugu saabsan.
GCS waxay raadineysaa inay bixiso qiime cadaalad ah oo tartan ah. GCS waxay xaq u leedahay inay badasho qaabkeeda qiimeynta waqti ogeysiis la'aan ah. Tusaale ahaan, hal qiime ayaa laga soo qaadan karaa dib u cusboonaysiinta qaab dhismeedka ganacsiga marka macaamilkii u horeeyey la isticmaalay, laakiin qiyaastaasi way is beddeli kartaa mustaqbalka marka cusboonaysiinta ay sabab u tahay ajuurada korodhka ah ee dawladda ee aan la filaynin ama kharashyada jeebka ka baxaya, ama kuwa kale. sababaha. Bayaanka ay soo saartay GCS ee aan la kulano ama ku garaacno qiimaha tartamayaasha waa in la tarjumaa sida aan had iyo jeer u garaacno qiimeynta tartamayaasha isla markaana aan u heyno xaquuqda aan ku garaacno qiimaha tartameyaasha ikhtiyaarka kaliya ee GCS. GCS qasab kuma ahan inay soo celiso farqiga u dhexeeya GCS iyo qiimeynta tartamayaasha ka dib marka iibku dhamaado.
GUUL MA AHA
Waxaad ku raacsan tahay, diiwaangelinta ama boos celinta magaca shirkadeed ee aad dooratay, diiwaangelintaas ama Boos celintaas kama dhigeyso xasaanad laga hor istaago diiwaangelinta, boos celinta, ama adeegsiga magaca shirkadda. Intaas waxaa sii dheer, waa inaadan ku kalsoonaan karin xaqiiqda ah in hay'addiinu ay samaysantay, mana aha inaad kaararkaaga ganacsiga, warqad u qorto, ama ku soo qaaddo kharashyo kale oo wata magaca shirkadda aad soo jeedisay ilaa ka dib markaad hesho asalka, gobolka, gobolka ama dukumintiga dawladda shaambada shaabadaysan. . (Gobollada qaarkood, gobollada ama waddamada qaarkood waxay soo saari doonaan "Shahaadada" ka mid noqoshada, tusaale ahaan).
Waad oggolaatay oo oggolaatay in macluumaadka aad na siiso si aan u diiwaangelino ama u xafidno magacaaga ay tahay, sida ugu fiican ee aad u ogtahay aqoontaada iyo waxa aad aaminsan tahay, mid sax ah oo dhammeystiran, iyo in wixii isbeddel ah ee soo kordha macluumaadkan nalagu soo bandhigi doono waqti go'an U hoggaansanaanta iyada oo la raacayo habraacyada wax-ka-beddelka ee xilligaas jiray. Haddii amarkaaga lagu meeleeyo wakiil, isaga ama iyadu waxay ku dadaali doonaan inay qoraan macluumaad sax ah oo ku saabsan magaca shirkadda aad dooratay, magacaaga, cinwaankaaga iyo macluumaadka kale. Si kastaba ha noqotee, khaladaad ama turjumaad khaldan ayaa dhaca. Waxaad u qaban doontaa GCS dhib la'aan qaladaadka noocaas ah ama turjumaadaha khaldan. Xulashada ugu fiican adiga ayaa ah inaad ku siiso macluumaadka qoraal ahaan adoo adeegsanaya emayl ama qaabab kale oo elektiroonig ah oo kaa caawinaya sidii loo xaqiijin lahaa saxsanaanta weyn. Waxaad ku raacsan tahay isticmaalkaaga Adeegyadeena inuu kali ku yahay halistaada. Waxaad ku raacsan tahay in Adeegyadan (yada) lagu bixiyo qaab ah "sida," "sida la heli karo" oo sal u ah. Waxaan si cad u ridi karnaa dhammaan dammaanadaha nooc kasta ha ahaadee, ha ahaado mid cad ama ha ahaato, oo ay kujirto laakiin aan ku xaddidnayn dammaanaddaha laxiriira ee ganacsiga ka soo baxa, taam ahaanshaha ujeedo gaar ah iyo ku-xad-gudub la'aan. Annagu dammaanad kama qaadno in Adeegyadu buuxin doonaan shuruudahaaga, ama in Adeegyadu ay noqon doonaan kuwo waqtigooda ku habboon, amni leh, ama khalad la'aan ah; kumana qabanno wax dammaanad ah oo ku saabsan natiijooyinka laga heli karo isticmaalka Adeegga ama xagga saxda ama aaminka macluumaad kasta oo la helo.
Anaga, anaga ayaa iska leh, waxaan ilaalinaa xuquuqda aan diidno diiwaangelinta ama aan xafidno magaca shirkadda aad dooratay. Haddii ay dhacdo inaan diidno diiwaangelinta ama keydinta magaca shirkaddaada, waxaan oggolaaneynaa inaan soo celinno khidmadda (yada) khusaysa. Waxaad ku raacsan tahay inaannaan masuul ka noqon doonin khasaare ama waxyeello ka dhalan karta diidmada aan u muujineyno magaca shirkaddaada.
Cinwaannada qaybta ku jira heshiiskan waxaa loogu talagalay ujeeddooyin tixraac keliya mana saameyn doonaan macnaha ama tarjumaadda heshiiskan.
Haddii ay dhacdo in qayb ka mid ah qodobbada heshiiskan loo fuliyo mid aan la fulin karin, qodobbada noocan oo kale ah waa la xaddidi doonaa ama laga tirtiri doonaa ilaa inta ugu yar ee lagama maarmaanka u ah in Heshiisku haddii kale ku sii jiri doono si buuxda oo saamayn ah.
Waxaad ku raacsan tahay in heshiiskani uu ku eg yahay heshiis buuxa oo gaar ah oo adiga iyo annaga noo dhexeeya oo ku saabsan Adeegyadeena. Heshiiskani wuxuu ansaxinayaa wixii heshiisyo hore iyo isfaham ah, ha ahaadeen mid dhaqan ahaan, dhaqan ahaan, siyaasad ahaan ama amarkii hore.
Heshiiskan waxaa laga galay gobolka Florida ee Mareykanka waxaana loo dhisi doonaa si waafaqsan shuruucda Florida, oo ka baxsan xulashada xeerarka sharciga. Qeyb kasta oo ka mid ah heshiiskan waxay u soo gudbineysaa awoodaha gaarka ah ee maxkamadaha Gobolka iyo Federaalka ee leh awooda Gobolka Broward ee gobolka Florida, waxayna ka tanaasulaan wixii awood ah, madal, ama madal aan ku habooneyn maxkamadahaas. Tallaabo kasta oo lagu xoojinayo heshiiskan, qaybta sii haysa waxay xaq u yeelan doontaa kharashyo macquul ah oo maxkamadda iyo khidmadda qareenka.
Heshiiskani wuxuu ka kooban yahay heshiiskii u dhexeeyey adiga iyo GCS iyo wuxuu ka hor imanayaa wixii heshiis hore ah, ha ahaado mid hadal ah ama mid qoraal ah, oo u dhexeeya adiga iyo GCS.
–Waxaan kugu mahadsan nahay doorashada guud ee Shirkadaha Shirkadaha, Inc. iyo noocyada kale ee xiriirka la leh adeegga feylkaaga.
Fadlan xor u tahay inaad nala soo xiriirto wixii su'aalo ama walaac ah ee aad qabto.
Adeegyada Guud ee Shirkadda, Inc.
Toos / Int'l: + 1-661-310-2930
Xiriir elektiroonig ah: Foomamka baaritaanka oo dhameystiran boggan